HTUT is the first & earliest company that proudly published as follows ;
+959 731 249 99
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံး ဘောလုံးစတားမိုဘိုင်း အက်ပလီကေးရှင်း
ဘုရားရှိးခိုးအမျိုးမျိုးကို ပါဠိ- မြန်မာ နှစ်ဘာသာဖြင့် ပူဇော်နိုင်မည့် အက်ပလီကေးရှင်း
အွန်လိုင်းဗေဒင် ကံမြင့် လာဘ်ပွင့်ယတြာ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် မင်္ဂလာအခါပေး ကဏ္ဍစုံ
မြန်မာတို့ရဲ့ အနာဂတ်အတွက် ပညာရပ်ပေါင်းများကို လေ့လာနိုင်မည်
အင်္ဂလိပ်စာ လေ့ လာသူတိုင်း ဆောင်ထားသင့်တဲ့ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ အဘိဓာန်
စိတ်ဝင်စားဖွယ် တီဗွီအစီအစဉ်များ နေ့စဉ် တင်ဆက်ပေးမဲ့ Star Channel TV
ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်သော ဗဟုသုတ အဖြာဖြာကို ဖော်ပြပေးပါသည်။
အလေးချိန်၊ အကွာအဝေး၊ တိုင်းတာမှု စသည်တို့ကိုအလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်သည်
The city newspaper published by the Yangon City Development Committee isadigital newspaper application developed by YCDC and HTUT Co., Ltd. Get the latest local news on the City News app. International News Business News Sports Technology An app that has been redesigned to make it easy to read on your mobile phone for free, with categories such as cases and articles.
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း နေ့စဉ်သင်းများကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ...
Our Support +959 731 249 99
ဘောလုံးစတား @BalloneStar · Sports Event Dec 3, 2020
တက်လမ်းပညာရေး @TatLanEdu · Education Website Dec 3, 2020